मलाई जन्म दिने आमालाई मैले के दिन सकेँ? | Suvadin !
अामाको मुख हेर्ने दिनमा एउटा मार्मिक पत्र
आमाको महिमा जति गाएपनि पुग्दैन किनभने आमाको उपमा नै छैन। त्यसैले फ्रान्सेली राष्ट्रपति बोनापार्टले भनेका छन्, 'मलाई असल आमा देउ, असल आमाबाटै असल नागरिक हुन्छन्।' असल अामाबाट नै असल अनि गुणी सन्तानले जन्म लिग्छन्, पाैराणिककालमा लेखीयका ग्रन्थमा भनिएका छन् अामा नै अाफ्नो सन्तानको पहिलो शिक्षिका हुन्, धर्मशास्त्रनुसार भन्ने हो भने बच्चाले आमाको गर्भमा छँदा पनि शिक्षाग्रहण गर्दछन्। उदाहरणका लागि महाभारतमा अर्जुनको छोरा अभिमन्युले आमाको गर्भमा छँदा शिक्षा ग्रहण गरेका थिए।
Apr 16, 2018 16:44
लेखक तथा युवा राजनीतिज्ञ हरि तिमिल्सिना अाफ्नी अामा जानुका तिमिल्सिनाका साथमा।
Shared: 97 times | Share this on
उपाध्यायान्दशा आचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्त्रंतु पितृ माता गौरवेणा तिरिच्यते।।
अर्थात ठूलोमा दश उपाध्यायहरूभन्दा एक आचार्य, सय जना आचार्यहरूमा एक पिता, हजार पिताहरूमा एक आमा महान छिन्। अामा शब्द छोटो र यति सरल छ कि जन्मेर भर्खरै बोल्न सिकेका बच्चाले पनि उच्चारण गर्न सक्छन्। जन्मेर पहिलो पटक उच्चारण गरिने पनि यही हो। सादा सरल शब्द तर गहिरो अर्थ लाग्ने हुनाले सायद शब्दकोषले पनि अामाको अर्थ पूर्णतया अर्थ्याउन सकेको छैन। आमाको विषयमा लेख्नु पनि सजिलो छैन।
'आमा' शब्दले संसारभरिकै आमाको कुरा आउँछ र आमाको गरिमामा यो संसार ज्यादै विशाल एवं विस्तृत छ। आमाको कार्य क्षेत्र जति विशाल र विस्तृत छ। त्यति नै महत्वपूर्ण र त्यति नै उच्च छ। वास्तविक भन्ने हो भने आमा सगरमाथाभन्दा अग्ली छन्। पृथ्वीभन्दा महान र विशाल छन्। तर, त्यस्तै ढुंगा माटो जस्तै कठिन तथा कठोर छैनन्। समूद्रभन्दा गहिरी छन्। आमा र्इश्वरकी पनि आमा हुन्। आमा मायाको पोको हुन्। हृदयकी खानी हुन्। धैर्यताकी प्रतिमूर्ति हुन्। सहनशीलताकी पनि खानी हुन्।
हाम्रा आध्यात्मिक ऋषिहरूमध्येका महान ऋषि अष्टाबक्रले पनि आमाको गर्भमा छँदा शिक्षा ग्रहण गर्नु भएको हो भन्ने ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। त्यस्तै वामदेव ऋषिले पनि आमाको गर्भमा नै रहँदा सबै देवहरूको सबै जन्मको क्रम जानेका थिए भनिएको छ। आमाले बच्चा गर्भमा भएको बेला असल आचरण गर्ने र धर्म ग्रन्धहरू पढ्ने र सुन्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा छ तथापि बच्चा पेटमा छँदाका दुःख दर्दको पीडा भने आमालाई मात्र हुन्छ।
'आमा'को गौरवपूर्ण सम्मान एवं महत्वलाई दीगो राख्नका लागि हाम्रो देशमा छोराछोरीले 'आमाको मुख हेर्ने' भनी वैशाखको औँशीमा आमालाई फलफूल एवं मिठाई र उपहार समेत प्रदान गरेर आदरपूर्वक सम्मान र माया प्रेमले अादर गरी मुख हेर्ने र स्वर्गबास भइसकेकी आमालाई सीधा–दान गरी सम्झना गरेर आदरभाव प्रकट गर्ने परम्परा चलिआएको छ। अामाको मुख हेर्ने दिनमा हिजोअाज अामालाई उपहार मात्र होइन सामाजिक सञ्जालहरूमा अामाको फोटो राखेर अाफ्नो मनमा अामाप्रति उब्जेका केही मिठा भावनाहरु पनि दर्साउने गरिन्छ। यो पनि प्रविधिको उचित प्रयोग अन्तर्गत नै पर्दछ।
अाफ्ना लागि जीवन समर्पित गरेकि जननि प्रति विशेष अवसरमा विशेष तरिकाले मनको भाव दर्शाउनु पनि अाफ्नो अामाप्रति ठूलो सम्मान हो। हुन त बृद्धाअामाले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदिनन् होला, अक्षर चिन्दिनन् पनि होला। तर, के अामालाई देखाउनैकै निम्ति मात्र तेसो गरिन्छ र? एउटा सन्तानले अाफ्नो अामालाई उच्च दर्जामा राखेर मनभित्र अामाप्रति रहेको भावना सबै माझ राख्नु उसको देखावटी मात्र होला र? उसो त हामी दिवङ्गत भएका अामाबुवाको सम्मानना वर्षमा एकदिन श्राद्ध गर्छौं। तर, के हामीले गरेको श्राद्ध दिवङ्गत भएका अामाबुवाले पाउँछन् त? वर्षमा एकदिन जन्म दिने अामाप्रति केही भाव दर्शाउन पनि किन कन्जुसाई गर्छौ हामी? अामालाई त सक्दो खुशी दिन सक्नुपर्छ। हरतबरले, हरहिसाबले सकेसम्म अामालाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ।
माध्यम कुनैपनि होस्, अामाको सम्मानमा बोल्न अनि लेख्न कुनै कसुर राख्नुहुन्न। हुन त हामीले अामालाई जति सम्मान र पूजा गरेपनि अामाले हाम्रो लागि दिनुभएको त्याग र समर्पणको अगाडि फिका नै हुन्छ। अामाको मुख हेर्ने दिनमा मात्र होइन वर्षभरि नै अामालाई पुज्नुपर्छ। एकदिन होइन, अामाको सेवामा जीवन बिताउन सक्नुपर्छ, तबमात्र सन्तान भएर जन्म लिगेको सार्थक हुन्छ।